Dilka iyo gubitaanka Marxuum Axmed Mukhtaar Saalax Muuqaal kale oo ka mid ah dulmiga faquuqa ee lagu hayo qabaa’ilka qaar - Halbeeg News
Dilka iyo gubitaanka Marxuum Axmed Mukhtaar Saalax Muuqaal kale oo ka mid ah dulmiga faquuqa ee lagu hayo qabaa’ilka qaar
in Qormooyin, Xulka
Maalin ayaa waxaan maqlay nin reer miyi ah oo dhaaranaya isaga oo leh: “Haddii aan waxaas yeelo ama aqbalo, waxaa ii bannaan guurka ina hebal”. Ina hebalta uu sheegayo waa gabar Madhibaan ah, kolka uu sidaas u hadlayana waxaa goobta fadhiya nin la dhashay gabadhaas!
Oo gabadhan miyaan diin ahaan guurkeedu u bannaanayn jaahilkan?
Qalbigii ayaa hal mar i ruxumay!
Alla dulmi weynaayeey!
Laga soo bilaabo xilli fog oo aan bilawgiisii la aqoon iyo illaa maantadan la joogo, Soomaalidu waxa ay si joogto ah u quursadaan ama u yasaan qabaa’il iyo dadyow kala duwan oo Soomaali ah.
Qabaa’ilkaas la yaso waxaa ka mid ah Tumaalka, Madhibaanka, Yaxarka, Yibirka, Jareerka, Jaajida iyo kuwo kale.
Siyaalaha dadkan loo faquuqo waxaa ka mid ah:
In aan siyaasadda dalka sad fiican laga siin.
In aan laga guursan loona guurin.
In bulshadu u aragto in ay yihiin kuwo ka hooseeya dadka kale.
In la caayo iyada oo nasabkooda wax laga sheegayo.
In aanay fursad u helin shaqooyinka, deeqaha waxbarasho iyo fursadaha kale ee dalka ka jira.
In magacooda iyo haybtooda loo adeegsado sidii cayda oo kale. Tusalee ahaan in dad kale loogu yeero “Midgaanyahow, Tumaalyahow IWM” iyada oo caay looga jeedo.
Ma jirto cid taqaan sababta dadkan iyo qabaa’ilkan loo yaso inkasta oo la sheego sheekooyin been abuur ah oo sheegaya in qaarkood hadda ka hor cuneen bakhti ama qaar kale ka soo jeedaan Yahuud.
Waxaa kale oo aan u malaynayaa in ay mushkiladdan qayb weyn ka qaateen culimadii hore ee kutubta fiq-higa kaga hadli jirtay waxa loo yaqaan “Kufka” ama “Cidda kuu dhiganta” marka ay ka hadlayaan guurka iyada oo dadka qaar halkaas ka fahmeen in qabaa’ilka qaar aanay iyaga u qalmin kana guursan Karin.
Hase yeeshee, waxaa la hubaa in aanay sababahaasi ahayn kuwo sax ah oo caqli ahaan iyo diin ahaan keeni kara yasmada iyo faquuqa lagu hayo dadkan.
Tusaale ahaan dadka lagu faquuqayo beri ayay bakhti cuneen (Waaba haddii ay sheekadani jirto’e), waxaa la isku raacsanyahay in ay bannaantahay in bakhti la cuno haddii daruuro kuu geyso oo aad lafahaagu u cabsato isla markaana aad weyso wax kale oo nafta ku qabato, laakiin faquuqu marnaba ma bannaana sida Allaah ku xusay Qur’aanka, dhamaan dadku waa simanyahay marka laga reebo cabsida Allaah oo lagu kala horreeyo.
Dhanka kale, denbi la galo haddii la isku faquuqayo, sow faquuqa kagama habboonaan lahayn dadkan qabaa’ilka Soomaalida ugu waaweyn ee xasuuqa iyo gumaadka kula kacay walaalahooda kale iyaga oo aan waxba ka galabsan?
Raadadka iyo muuqaallada xun ee arinkan yasmadu ku leeyahay bulshada waa mid aad u ballaaran. Tusaale cad waxaa u ah waxyeellada iyo raadka xun ee uu leeyahay faquuqu dilka iyo gubitaankii Khamiistii (20/09/2018) xaafadda Towfiiq ee Muqdisho loogu geystay Axmed Mukhtaar Saalax oo garaash ku lahaa xaafaddaas.
Denbiga loo dilay Axmed waxa uu ahaa in uu gabar ka soo jeedda qabaa’ilka wax yasa ee Soomaalida u doonay wiil uu adeer u yahay oo ka dhashay qabaa’ilka la yaso.
Gabadha lama kufsan!
Gabadha lama masaafaysan oo waalidkeed lagalama baxsan sida marar badan dhacda!
Gabadha waalidkeed ayaa Axmed ka doonay.
Kasii darane, aabihii gabadha dhalay oo ahaa gabadha waliyu-amrigeedu waa siiyay gabadha Axmed iyo wiilka uu adeerka u yahay ee ka soo doonay, laakiin taasi waxay u liqmi weysay dad qaraabo ah oo middiyo iyo baangado ku weeraray Axmed oo hawl maalmeedkiisa iska wata deedna markii naftu ka baxday maydkiisa dab suray oo sidii Koofilkii Daraawiishi dishay gabay ka dul jiibiyeen.
Arinkani maahan denbi dil oo keliya ee waa denbi isugu jira dil, nacayb, faquuq iyo xaqiraad addoomo ilaah oo aan gelin wax denbi ah oo lagu faquuqo.
Xalka arinkani ma sahlana waayo qarniyo badan ayuu soo jiray ilaa haddana waxaa la weysanyahay rabitaankii iyo geesinimadii lagu burburin lahaa sanamkan faquuqa.
Sagaashamaadkii qarnigii tegay ayaa BBC waxa ay qabatay barnaamij loogu magac daray “Quursigu qiil ma leeyahay”. Xilligaaas ayaa culumo iyo caammo badan oo ka qayb gashay barnaamijku waxa ay isku raaceen in aan quursigu qiil lahayn, deedna gabar fannaanad ahayd oo ka qayb galaysay barnaamijka isla markaana ka soo jeedday qabaa’ilka la yaso ayaa raggii meesha ka hadlayay ku wada marti qaadday in ay gabdho Madhibaan ah siinayso si ay u guursadaan isla markaana ay si ficil ah u jebiyaan xeerkii xaqiraada, lakiin nasiib darro raggii ninna ma aqbalin gabdhihii la siiyay.
Taasi waxa ay ku tusinaysaa sida mushkiladdan bulsho u xididaysatay.
Anigu xal gooni ah uma haayo mushkiladdan, waxaase aad iyo aad ii damqay yaska gaaray in qof loo dilo sidee iiga soo dooni kartaa gabar?!
Allaah qabriga ha u qaboojiyo Marxuum Axmed Mukhtaar, bal arinkanna bulshadu dood ha geliso waxaa dhici karta in ilaah xal u keeno!
Cabdirisaaq Maxamed Axmed
Taliska ciidamada booliska oo sheegay in dad loo soo xiray dilal ka dhacay Muqdisho